.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: စာလုံး ဒီဇိုင်းအလန်းလေးတွေ ရေးချင်ရင်
စာလုံး ဒီဇိုင်းအလန်းလေးတွေ ရေးချင်ရင်
ခုနောက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းတွေ နာမည်လေးတွေကို ဒီလို စာလုံးဒီဇိုင်း အလန်းလေးတွေနဲ့ ရောစပ်ပြီး ရေးနေကြသလို
Flash Songs တွေ Photoshop တွေမှာလည်း သုံးနေကြပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ လည်း ကိုယ်ဒီဇိုင်း စဉ်းစားတတ်ရင်
ဒီပုံလေးတွေ အသုံးပြုပြီးတော့ အလန်းဇယားလေးတွေ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးလို့ ရပါသေးတယ်။ ဒီပို့စ်လေးကိုတော့
Ning ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ တင်ထားတာ တွေ့လို့ အသုံးဝင်တာနဲ့ သိမ်းထားတာ တော်တော် ကြာပါပြီ။ ဟိုတစ်လောက
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်က Mp3 သီချင်းများ ဒေါင်းရန် စာမျက်နှာလေးမှာ သုံးထားတာလေးကို
သဘောကျလို့ မေးသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီပို့စ်လေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။ မူရင်းပို့စ်ပိုင်ရှင်ကိုတော့
ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ အခုလို စာလုံး ဒီဇိုင်းလေးတွေ စုံစုံလင်လင်လေးစုပြီး တင်ပေးတဲ့အတွက်
အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ အောက်မှာမူရင်းပို့စ်အတိုင်း ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
GTALK status မှာ အရုပ်လေးတွေသုံးချင်လား.. ချက်ရွမ်းမှာ ပဲ ♧ ♤ ♧ ♡ ဆော့ချင်လား
သူငယ်ချင်းတွေ creative ဖြစ်နိုင်သရွေ့ ရောစပ်သုံးလို့ရအောင် အကုန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..လိုရာ Copy Paste ✄သုံးစေ..ဗျာ...........
⊙¤ ㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘&ang90;「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ &becaus;∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏
⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩
ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ￡ ❤ ｡◕‿◕｡ ✎ ✟ஐ ≍ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~
◕‿-｡ ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛
⊙¤ ㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘&ang90;「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ &becaus;∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦
▩ ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ￡ ❤ ｡◕‿◕｡ ✎ ✟ஐ ≍ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹
~.~ ◕‿-｡ ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚
◊ ♥ ╠ ═ ╝▫ ■ ๑ » « ¶ ஐ © † εïз ♪ ღ ♣ ♠ • ± ° •ิ. • ஐ இ * × ○ ▫ ♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ εїз ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ &becaus; ∴ ∷ ＃ ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ♧ ♤ ♧ ♡ ♬ ♪ ♭ ♫♪ ﻬ ஐღ ↔ ↕ ↘••● ¤ ╬ ﹌ ▽ ☜♥☞
α в c ∂ εfg н ι נ к ℓ м η σ ρ q я s т υ v ω x y z άв ς đ έfģ ħ ί ј ķ
Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ x ч ž Å Á Ä Ã å á ä ã æ ßbc © Ðdé êfƒ g h
ï î j k £ m Ñ ñ η ô õ ø
║ ║║╚╗╔╝║ ║║
║ ╔╝ ║║ ║╔═╝
☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓→←&ang90;↔▲▼ !"#$%♣c÷à☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓→←&ang90;↔▲▼ !"#$%♣c÷à
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨ `*~*~*☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄
█ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ￡ ❤ ｡◕‿◕｡ ✎
✟ஐ ≍ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-｡ ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂
❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:｡✿*ﾟ‘ﾟ･
⊙¤㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘&ang90;「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ֆ ֆ
Posted by Thurainlin at 09:34
Labels: Blog, Flash Song, Font, အသိပေးခြင်း